Umuzi wasendulo Cherkasy e-Ukraine emaphakathi inomlando omude futhi ezithakazelisayo, ushiye ku inkumbulo izindawo zakhe eziningi ezinhle futhi izinto.
Namuhla abahambi ngokwethukela sokunaka emadolobheni amancane e-Europe, kanjalo abaningi izivakashi izindawo avele Cherkassy. IziNdawo, Guide okuzoba ezithakazelisayo kokubili izihambi nezakhamuzi esisha edolobheni, le ndawo kukhona izifundo okukhulu kwamasiko futhi ukubaluleka yobuchopho. Sizokhuluma ngalokho nakanjani angabonwa kuleli dolobha kunalapha ukwenza futhi indlela ukuchitha isikhathi.
idolobha Cherkasy itholakala maphakathi Ukraine, osebeni kwesokudla Kremenchug kwesigubhu. Ngokomlando, emzaneni kwaba endaweni amasu ku sifinyelela phakathi Dnieper. Lo muzi owakhiwe phezu phezulu egqumeni, okwayinika inzuzo ezivikela. Cherkassy namuhla bese zisakazwa ingxenye flat zensimu, kodwa lonke leli dolobhana kuyinto esihlukile sendawo elinamagquma. City ngokwanele enikeziwe umhlaba nemithombo yamanzi, uye njalo okuyinto intuthuko esimeme.
I etymology kwegama
Abacwaningi izinguqulo ezahlukene ngemvelaphi igama Cherkassy. Nokucabanga wokuqala kusekelwe yokuthi kwakheka igama ndawo ngenxa ukuhlanekezela igama elithi "Circassians", okungukuthi abakhileyo eCaucasus. Kukhona inguqulo igama livela Turkic izwi inhlanganisela "Chiri KISS", okusho ukuthi "abantu amandla." Abanye abacwaningi bakholelwa ukuthi igama elithi "Cherkasy" lisuselwa Ossetic elithi "ezinkozi". Noma kunjalo, zonke izinguqulo kuholele eCaucasus kanye negama lomuzi lihlotshaniswa ethile ye-ethnos - the Cossacks. Lezi zici ezimbili babe ebaluleke kakhulu emlandweni futhi kumiswa edolobheni.
Abantu kuqala lolu suku esifundeni emuva enkathini Paleolithic. Bakhandwa yokupaka izizwe ayimizulane ngubani uyasala iminonjana ngesimo amathuluzi lasekuqaleni. Kamuva, lapho wahlala abameleli zimovnikovskoy futhi chernyakhivska amasiko kuzo iminonjana zokuhlala amathuna nezindawo zokungcwaba. Ngo 6-3 eminyaka BC, kulezi zindawo aye elalihlala amaSkithe akha umnyombo Ngokuzayo sezizwe zakwa Slavic. Futhi wahlala lapha izizwe ezifana ukusula Sarmats Berendei, Alans. Ubufakazi bokuqala obubhalwe bokuba khona edolobheni sihlehlela emuva ngonyaka 1394, okukhulunywe ngaye zemihla enqabeni imingcele oseningizimu Kievan Rus. emakhulwini amaningi eminyaka Cherkassy wahlushwa abahlaseli ahlukahlukene: lwesiTatar-namaMongol naseLithuania, nabasePoland. Esikhathini esithile ngekhulu le-15 kwaba maphakathi Cherkassy eldership, ikhaya kumbusi Lithuanian. Ngemva kwesikhashana ezinza lapha izizwe Cossack owazihlanganisa abahlali ekulweni naseLithuania futhi AmaTatar. Ngo 1493 Cherkasy (Cossacks) ethumba Ochakov, lo muzi owakhiwe kabusha abaseTurkey futhi YaseCrimea AmaTatar. Ukuze uvikeleke uyokulwa nezitha kusekelwe Cherkassy castle, phakathi namashumi ambalwa eminyaka, uqinisa nokuthi uyaziqinisa kokuvinjezelwa eziningi. Omuzi aqala ukuba zakhelwe ngalesi inqaba, kwi egqumeni Dnieper. Ukubaluleka amasu ka edolobheni lukhula ngenxa ingozi yokwanda kokungabi lihlaselwa emazweni angomakhelwane. Freedom-onothando uhlamvu cherkasstsev ebonakaliswa ngokuhlanganyela kwabo asebenzayo sevukelombuso phesheya 16-17 eminyaka. indima ebalulekile eyadlalwa izakhamuzi zedolobha emzabalazweni abantu Ukraine ngokumelene amandla Polish izinduna. Okwesikhathi esithile, umuzi waphenduka yingxenye ye-Ukraine, kodwa kamuva waphindiselwa Poland. Ngo 1793, Cherkassy baba ingxenye yoMbuso Russian. It has a Kusizuzisa on ukuthuthukisa emzaneni, lapha uqala ukwakha amabhizinisi zezimboni kanye namasiko. Ekhulwini le-19, uqala izimbali wangempela Cherkassy, ujantshi lapha sabekwa, savula namafemu eziningana enkulu, wezohwebo ezinkulu yomngcwabo. Ngenxa yalokho we Okthoba Revolution, umuzi waphenduka, kanye Ukrainian SSR zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Kusukela ngo-1991 iyona isikhungo lesifunda of isimo Ukraine. Ukuthabela umlando onothileko komuzi wamvumela sokuqongelela eziningi izindawo ezithakazelisayo kanye ezikhangayo. Ngakho-ke, izivakashi ziya ziba mandla zokuhlanganisa ku ziyaphi Cherkassy. Yini ukubabona kuleli dolobha? Kukhona izimpendulo eziningana kulo mbuzo.
Okwamanje, umuzi isikhungo ezinkulu zomnotho, izitholele nezinto zokuya Ukraine. ukuzinza yayo evumela imboni chemical nokudla, kanye nezinkampani yezimoto. Umuzi iyikhaya labantu abangaba ngu-280.000. Futhi Cherkassy, ogama ezikhangayo zihlukene futhi ezikhangayo, kuyinto izivakashi isikhungo esiyinhloko. Le ndawo ingenye ethembisayo, kusukela idolobha has a engaba amakhulu zemfundo, ukungcebeleka kanye namasiko. Nge Cherkassy ezihambisana biography okudala Shevchenko, K.Paustovsky, P. Tychyna.
Ukuhlola Cherkassy ezihehayo okuyizinto Sinesithakazelo esikhulu zomlando, kubalulekile ukuba uqale kusukela Hill Inkazimulo. Iyindawo lapho kuvele zokuhlala 6-8 eminyaka lasendulo. Futhi, kwaba khona edumile Cherkasy inqaba, sibonga ngalo dolobhana zakhula abuye atfutfukiswe njalo. Namuhla, ngasegqumeni injena elinye lamasonto main emzini, futhi uma phezulu kwakukhona lokhuni zintathu Cathedral. Kulona kanye igquma lapho uyisikhumbuzo behlonipha amasosha kanye abavikeli ezingemuva ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili. Ngenkathi kwakhiwa yisikhumbuzo, ngeshwa, zonke izinsalela izakhiwo mlando ezibhujisiwe. Entabeni wangcwatshwa mayelana 5000 efile futhi kumi sibalo we-Motherland. Kusukela phezulu belibona kahle edolobheni futhi Dnieper. Kulabo abafisa ukufunda okwengeziwe mayelana nomlando edolobheni Cherkasy usebenza iminyuziyamu eziningana ngazo Kuzoxoxwa.
Kubathandi izakhiwo Cherkasy idolobha kabani ezikhangayo sinokubaluleka undoubted, kunikeza ithuba lokubona izinto eziningana eliyingqayizivele.
Ukwakhiwa edume kunazo Cherkasy kuyinto nendlu enhle Shcherbina (manje Wedding Palace). Lesi sakhiwo Kwakhiwa ngenxa yokuhlala kukasomabhizinisi ezazithe waqongelela dolobha ku ukwakhiwa kwalesi sesitimela 1892. isakhiwo ngokunethezeka esikhathini Neo-Renaissance futhi kwadingeka ezitebeleni, izisebenzi zasendlini engadini enhle. Ngo-1907, Shcherbina endlini lidlule ngaphansi Assembly wesifundazwe. Ngemva inguquko isakhiwo zadliwa uhulumeni. Abanikazi entsha ubhubhisé ingxenye izakhiwo kanye nensimu ezizungezile, esikhundleni iminyango. Kodwa indlu liyaqhubeka lijabulisa ezozibonela ubuhle bayo.
Enye "simangaliso" yezakhiwo iyona Blue Palace. Ngakho edume ngokuthi "Slavyanskaya" isakhiwo ehhotela. Ukwakhiwa lamiswao ngomyalo usomabhizinisi Skaryna ngu wezakhiwo V Gorodetsky ngasekupheleni kwekhulu le-19. Lesi sakhiwo iyingqayizivele kweqiniso isitayela "neo-gothic", ngempela ezingavamile for eMpumalanga Yurophu. Namuhla, isakhiwo iyisonto ebhange, indlu kahle kuyilungisa ubukeka olubabazeka kakhulu, ikakhulukazi kungakhanyi ukukhanya ebusuku.
isakhiwo abahlukile kuyinto umbhoshongo amanzi, elaklanywa umakhi kanye unjiniyela Shukhov ngo-1914. imiklamo Zazinjalo mayelana 200 ku Ukraine, kodwa abambalwa kuphela ezisekhona. Ziyamangalisa, openwork isakhiwo namuhla akuyona esimweni esihle, kodwa Cherkassy ezihehayo zazo kancane kancane ukuba kubuyiselwe, bathoma ukucabanga kulondolozwe lesikhumbuzo. Umbhoshongo lwenzelwe ukunikeza lo muzi amanzi okuphuza, kodwa namuhla alisetshenziswa inhloso yazo.
Kuyoba ezithakazelisayo ukubheka wokwakha Cherkassy ngonodoli, etholakala endlini yasekuqaleni kwekhulu le-19. Lesi sakhiwo kungokwalabo okuthiwa "imodeli izindlu" wezakhiwo A. Ruska. Ngo ngomfanekiso wakhe esakhiwe izakhiwo zomphakathi lonke elase-Ukraine.
Cybulski House - omunye lesikhumbuzo wezakhiwo Cherkassy. Lesi sakhiwo yakhiwa kuleli maphakathi nekhulu le-19 futhi uyisibonelo izakhiwo European wonke ngaleso sikhathi. Namuhla inedlanzana Museum of "ibhuku elilodwa" - "Kobzar" by T. Shevchenko.
E-Ukraine, emadolobheni amaningi yaziwa ngokuthanda amapaki yayo kanye nezinye izinto zemvelo, iyathinteka futhi Cherkassy. Izikhangibavakashi - Waterfall, izingadi, amapaki, umfula - uyakufanelekela ukuba babanikele a izizinda ambalwa kokuphumula. The main indawo yemvelo emzini kuyinto Dnipro, kuso kuyinjabulo ukuhamba esikebheni. Lokhu kukuvumela ukuba abone umuzi kusuka engela engavamile futhi ujabulele ukubukwa zemvelo.
Awunayo ngokuvamile ukubona ehlathini real zikaphayini e Cherkassy iyiphi. Lokhu epaki ubizwa ngokuthi Park we weminyaka engu-50, iJubili Park, pine ihlathi. A epaki enkulu nge amachibi, inani elikhulu izitshalo ezahlukene, yokuhambahamba izindlela for Abahamba ivumela isikhathi esihle ngasiphi isikhathi sonyaka.
Eduze nedolobha Side cut kuyinto impophoma. ukuphakama kwalo imayelana 2 amamitha, ke kuphakamisa umhosha olunothile mayelana ikhilomitha elilodwa. Lezi zilwane le sayithi yemvelo akuyona ejwayelekile Ukraine, ngaphezu kwakho konke, ziyafana amawa Norwegian.
Abavakashi asiwazi njalo isikhathi esiningi, futhi unombuzo: yini ukubona e Cherkassy ngosuku? Izakhamizi zaseFree bathi ezikhangayo esemqoka - kuba:
- Cathedral St Michael;
- Hill Inkazimulo yesikhumbuzo eziyinkimbinkimbi nge;
- Cherkasy umbhalisi, aka House Shcherbina;
- isakhiwo "Ukrsotsbank" ebhange, ihhotela zangaphambili "Slavyanskaya";
- Valley of Roses;
- Taras Shevchenko Museum, ukuvalelwa isakhiwo Cybulski;
- ethempelini lamaBuddha "White Lotus";
- Shukhov umbhoshongo;
- zintathu Cathedral;
Ngokuvamile, uma kukhona imizi, sengathi eziklanyelwe ukuhamba, omunye wabo, ngokuqinisekile, Cherkasy. Yini ukubona edolobheni? Umuzi ngokwawo! On ke ukuthi kudingeka uhambe kancane, efuna emkhathini, okuyinto ukukhangana main.
Cherkassy, ogama ezikhangayo ukugcina umoya izikhathi akunakwenzeka ukuba ukucabanga ngaphandle amathempeli. Zakha umoya ezikhethekile bese ugcine umlando abantu. Umuzi ine ezinye zezindawo ebaluleke kakhulu yokukhulekela. Into enkulu kunazo zonke lombhishobhi St Michael, sizobe ukukhuluma ngakho ngokuningiliziwe kamuva. Futhi Kumqoka kakhulu emlandweni umuzi Holy Trinity Cathedral. Lavuselelwa ngo-1991 eduze indawo mlando - Castle egqumeni. Kusukela ngekhulu le-17 egqumeni kukhona etempileni ladilizwa lapho kwakhiwa iSikhumbuzo eNkazimulweni. Lokhu, ithempeli ezincane eziningi-ephethwe akusho ukubuyisela ukubukeka zomlando lombhishobhi wangaphambilini, kodwa uyaqhubeka isiko lakhe. Enye lombhishobhi ezithakazelisayo Cherkasy nesonto of kukaJesu Blessed Virgin Mary. Yakhiwa ngo-1905, khona-ke kancane abhidlizwa ngesikhathi sempi. Ezikhathini zaseSoviet, kwakuyizwi kuphela ethempelini ezisebenza kuwo wonke umuzi. Kusukela ngo-2002, isonto yayiswa endaweni entsha.
indawo Awesome for emzini Ukraine i ethempelini lamaBuddha karate, "White Lotus", uhambo okuyinto nakanjani zifakwe uhlelo yangekhulu Cherkassy. At the site mlando lapho ithempeli amaVeda lasendulo kwaku amaqhawe ukukhanya, ngo-1990, kwathiwa lakhiwa abalandeli wesikole kung fu. Ithempeli lakhiwa phezu imodeli eLaos futhi iyona enkulu kunazo zonke eYurophu. Phakathi nohambo ungabona esigabeni se-okhi ongcwele, omnyama nomhlophe Stupa, iqhaza emkhosini itiye.
Cathedral St Michael
Ngo-1994, idolobha lase-Cherkassy, nokuzwa okuyinto izincwadi esizifundayo, ithole kwenye indawo eyingqayizivele. Cathedral St Michael, okuyinto namuhla ethempelini elikhulu e-Ukraine, it ongama kubantu ayizinkulungwane 12 avulwa. Waqondisa umsebenzi wokwakha lo msebenzi futhi waqhuba wadala Metropolitan Sophronius. Cathedral eyakhelwe ngesitayela WaseByzantium nge 7 amakhanda. ukuphakama Its 74 amamitha. Ibandla uhlela ukwakhiwa insimbi ethempelini umbhoshongo emhlabeni 100 metres aphezulu. amasevisi Daily ziqhutshwa esontweni, ngamaholide lapha ukuqhuba inkonzo ahlukahlukene ngokuvakashela abefundisi.
Umzila 1 usuku
Izivakashi bavame ukubuza umbuzo: yini ukubona e Cherkassy ngosuku olungu-1? omunye wemizila ebekwe ezihlongozwayo ingakhethwa ukuhlolwa. Nakuba isikhungo esingokomlando leli dolobha ingenkulu kakhulu, futhi bangakwazi lokuyibhekisisa ngokushesha ngokwanele, kukhona ezikhangayo ukuthi kungenzeka ungakunaki. Ukuze ehlelekile izivakashi hambo eduze Cherkassy efana nokuhamba namabhasi, okukuvumela ukubona izindawo eziyinhloko. Ukuzihlola, ungaqala nge uhambahamba Boulevard Shevchenko ujenga onsundu ukuhamba eGqumeni Inkazimulo, ukuba abone umuzi iyonke. Bese uya-zintathu Church. Okulandelayo, thatha ukungcebeleka ngokusebenzisa zedolobhakazi, ibheka izinto yezakhiwo. Vakashela Cathedral St Michael, umoya eSigodini Roses. Nyá ngosuku unga cruise ku Dnieper. Cherkassy, nokuzwa, izithombe zazo ezikufanelekelayo abaholela engcono, ingabe ukuba babanikele luhlolo kwabo esingaphezu kosuku olulodwa. Kodwa into eyinhloko kungabonakala ngosuku, udinga uhlelo ezinhle umzila.
Ngo Cherkassy kube yinto, futhi ngaphandle indawo. Into yokuqala ukuthatha uhambo ngokusebenzisa amapaki amahle komuzi. Rose Valley - kuyinto epaki elincane eduze noMfula Dnieper. Lapha, kusukela ngo-June kuya ku-October yokuqhuma rose setha zinhlobo, futhi ukuhamba lapha - kuyajabulisa. Lesi siqiwu ine alelo washi lika engavamile ngo fomu bazana. Futhi, kusukela esigodini sase-ukubukwa amahle lomfula. Ukuze abalandeli nezilwane Cherkassy zoo, lapho ungabona izilwane bendabuko kanye ezingavamile ukusebenza. Futhi njalo ukusebenza Cherkasy zokubukela amabhayisikobho, lapho ungakwazi ukuchitha isikhathi injabulo nenduduzo. Kusukela ngasekupheleni kuka-Ephreli iqala ukuzulazula kanye Dnieper. cruise Traditional eMfuleni ihora elingu-1, kodwa kungenzeka ukuba uthole uhambo olude nokuningi. Ukudoba uhambo ihlelwe esiqhingini, lapho ungakwazi ukujabulela ngokugcwele imvelo Ukraine.
Ngo Cherkassy wathola eziningi eziqoshiwe engavamile, futhi ukufuna kwakho ube uhlobo imfuno phakathi komuzi. Kufanele uthole izikhumbuzo kanye Golokhvastov uthambekele Prokopovne, moonshine, amadombolo bese Plumbers, bassoon futhi ikati uBehemoti.
Ukucabanga ngani ubona Cherkassy, ungakhohlwa mayelana iminyuziyamu. National History Museum inikeza iqoqo ezinhle kakhulu ethnographic, lapho ungafunda khona indlela Songa isiphetho esifundeni, njengoba abantu bokuqala abahlala kuyo wahlala. I Ukuziqhenya esikhethekile Museum lwamathambo ephelele woolly. Enye Museum ezithakazelisayo ezithile zenye yalezi, okuyinto kuveza izinhlelo ezihlukahlukene imisebenzi best of Taras Shevchenko, poems "Kobzar". Futhi nje, ungabona imidwebo, iqoqo amakhadi, namaphrojektha nezinye izinto eziningi ezithakazelisayo. Esikhathini Art Museum ungabona iqoqo ezinhle Folk art kwabakhileyo Dnieper esifundeni, iqoqo esihle izithombe 16-19 eminyaka.
Namuhla, emadolobheni amaningi Ukraine esicini esibaluleke kunazo kwentuthuko ezokuvakasha. Cherkassy ifa kulesi sici zinethuba lokuthuthuka. Izivakashi nethuba uhlale emzini amahhotela 9 ezahlukene amanani. Ukufinyelela edolobheni Kulula, usebenza Cherkassy sezindiza sihamba kujantshi, futhi kukhona ibhasi emfuleni ngokuqondene imizana eseduze.